UJustin Bieber Denies Izibongozo zeAsaxual zesini- Iendaba zaseNigeria kunye neGl
Justin Bieber uyaziphika izityholo zokuhlaselwa ngokwesondo, ummi wase-US phakathi kwalabo babulawa kuhlaselo lobunqolobi e-UK, uCarlo Ancelotti otyholwa ngobuqhetseba werhafu. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. UJustin Bieber uyakhanyela izityholo zesityholo sokuhlaselwa ngokwesondo esenziwa kuye
ujustin bieber Uphume esiya kuzikhaba izityholo zesityholo sokuhlaselwa ngokwesondo esenziwa kuye lienenekazi eligama lingu Da. Eli nenekazi lathatha i-Twitter ngoMgqibelo, nge-20 kaJuni, ngo-2020, apho latyhola u-Justin Bieber ngokumhlukumeza ngokwesondo ngo-2014.
Ngokutsho kwakhe, udibene noBieber ngelixa wayeye kumsitho eTexas kwaye wabanga ukuba yena nabahlobo bakhe bamenyiwe ukuba babuyela kwihotele ye-pop star apho wabethwa khona ngokwesondo ngaphandle kwemvume. I-tweets sele icinyiwe.
Kwimpendulo yakhe, inkwenkwezi yomculo inike ingxelo eneenkcukacha malunga nokuhamba kwakhe ngosuku ekwenzeka ngalo izityholo zokuxhatshazwa ngokwesondo.
2. INigeria ifuna inyathelo emva kohlaselo lweKhomishini ePhakamileyo yaseGhana
Umphathiswa Wezangaphandle wezaseNigeria, uMnu. Geoffrey Onyeama
UMphathiswa Wezangaphandle wezaseNigeria, uMnu. UGeoffrey Onyeama lifuna inyathelo elingxamisekileyo kurhulumente waseGhana emva kokuba amadoda athile axhobileyo etshabalalisile isakhiwo esingoweKomishini ePhakamileyo yaseNigeria eAqura.
Amadoda axhobileyo kuthiwa aqhekeze ngesango elivaliweyo kunye ne-bulldozer kwaye athoboza iinxalenye zesakhiwo esinemigangatho enye esakhiwa kwisakhiwo. Inkosi yePalamente yeOsu, Nii Okwei Kinka Dowuona VI, kwisiteyitimenti esikhankanyiweyo ukuba lo mhlaba uthe watshiswa kuwo ulwakhiwo yi-Osu Stool kwaye wahlukile kwakwindawo ehlala iKomishini ePhakamileyo yaseNigeria.
3. Ukuvalwa kwecuba eMzantsi Afrika: Iicuba ezinokungabikho kude kube ngu-Agasti, phakathi kwezithintelo ezisemthethweni
Kwizigidi zabantu abatshayayo eMzantsi Afrika, kujongeke kancinane amathuba okuba icuba lingakwazi ukubuyela ngokukhawuleza. Amatyala aliqela akhutshwe ngokuchasene nokuvalwa kwecuba azabalaza ngokwaphula umthetho, kwaye ngokutsho komnye wabaphembeleli abadumileyo, isigqibo sokugqibela ngalo mbandela sinokuvunywa ngo-Agasti.
Ityala lase-Bhritane laseTshayina laseTshayina (BATSA) sele lityaliwe emva kokuba bekucwangcisiwe ukuba liqale ngoMvulo. Bev Maclean, obesilwa nokuthintelwa kwecuba kunye nemibutho yoluntu, uthi ifumene i-imeyile evela kubameli benkampani echaza ukulibaziseka.
4. Ummi waseMelika phakathi kwalabo babulawa kuhlaselo lobunqolobi e-UK
Ipolisa lase-UK lishiya iintyatyambo kwindawo yesikhumbuzo sokuhlaselwa.
Ummi waseMelika wayephakathi kwalabo babulawa kuhlaselo lwezoyikiso kwidolophu ekumazantsi eNgilane ngoMgqibelo, i-Ambass yaseMelika iqinisekisile. Ngokwamapolisa, abantu abathathu bagwazwa basweleke abanye abathathu basala benzakala kakhulu kwisigameko sabanqolobi kwidolophu yaseFunda ngomgqibelo.
Imithombo yeendaba yapapasha ukuba ixhoba ngummi oneminyaka engama-39 wasePhiladelphia ogama lingu UJoe Ritchie-Bennett. Uhlaselo lwenzekile malunga ne-7 pm ixesha lendawo (2 pm ET) ngoMgqibelo e-Forbury Gardens, ipaki yoluntu e-Read, idolophu enkulu ejikeleze i-40 yeekhilomitha ngasentshona kweLondon, Amapolisa ase Thames Valley athi kwisiteyitimenti emva kwesehlo.
5. UCarlo Ancelotti: Umphathi we-Everton otyholwa ngobuqhetseba berhafu ngabatshutshisi baseMadrid
Umphathi we-everton UCarlo Ancelotti utyholwe ngabatshutshisi eSpain ngokungabhatali i-1m yeedola (i- $ 904,000) kwirhafu. Intlawulo inxulumene nerhafu ngenxa yokufumana amalungelo emifanekiso ngexesha lase-Italiya njengomphathi weReal Madrid ngo-2014-15.
I-ofisi yoTshutshisi boLuntu lwaseMadrid ibanga ibango elinamashumi amahlanu anesibhozo efihliwe lokuzama ukuphepha imisebenzi yakhe yerhafu ayise kwi-Ofisi kaNondyebo engenatyala. I-Ancelotti okwangoku kufuneka iphendule kwaye u-Everton uthe abanalo ntetho ukwenza intetho.
Bona kwakho: U-Justin Bieber Utyhila ukuba unesifo seLyme